About Us - Ningnbo Yierka Tombo-kase Co., Ltd
Tombo-kase Ningbo Yierka Co., Ltd dia naorina tamin'ny 1982 ny fikarohana, hampitombo ny fanamboarana sy hivarotra hydraulic sy pneumatic tombo-kase. Ningbo Yierka ny famehezana ireo vokatra vokarina amin'ny teknolojia be pitsiny sy ambony kalitao sy ny matanjaka mpanjifa mifantoka no handresy antsika ny matoky ny vaovao ny mpanjifa hatramin'ny nanorenana.
Tombo-kase Yierka manana ekipa matihanina lasitra fikarohana sy ny bobongolo sy ny foibe fikarakarana sy ny fahaizany amin'ny vokatra famolavolana, bobongolo fampandrosoana sy ny famokarana fampidirana, amin'izao fotoana izao dia manana mihoatra ny 20000set lasitra. Yierka Tombo-kase tombo-kase maro koa ara-nofo sy ny fampiasana amin'ny rijan-dehibe kalitao avo akora sy ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena izany dingana famokarana azo mifanaraka hanome mpanjifa matihanina manokana famehezana vahaolana.
Tombo-kase Yierka tsy malaza any Shina, fa koa nivarotra tany Eoropa Atsinanana, Moyen-Orient, Amerika Atsimo, ary Azia Atsimoatsinanana Japana. Tombo-kase Yierka mafy mino fa Fanavaozana sy ny tsy fivadihana ny orinasa filozofia no ilaina mba hanitarana ny faravodilanitra sy ny hanampy ny vao na ny ela mitombo mpanjifa aminay, avy amin'ny hery hery.